MaineHousing Outreach - Somali
Hay'adda Guriyaynta ee Gobolka Maine (MaineHousing) Waxay bixisaa mashaariic iyo adeegyo u fududaynaya dadka deggan gobolak Maine inay guri helaan. Dad ka badan 90,000 oo qof ayaa sannadkan ka faa'iidaysan doona mashaariicdayada. Mashruuca kaalmada ah waxaa ka mid noqon kara:
Kaalmaynta guri iibsashada: Maine Housing waxay bixinaysaa qiimo dulsaar yar oo go'an leh iyo kaalmo kale si dadka reer Maine loogu sahlo inay guri iibsan kraan. Waxaa kale oo jira heshiisyo aan lagaa rabain lacag hor maris ah ama wax yar uun lagaa qaadayo, in kastoo haddii aad weli u sii baahato aan bixinno kaalmo ku wajahan lacagta dillaalka lagu baxsho.iyo lacagta hormariska ahba. Heshiiska guri iibsiga ee MaineHousing, waxaad heli kartaa in lacagta lagaa cafiyo markaad shaqo la'aanta tahay.
Kaalmada lagaa siinayo dib u hagaajinta guriga: MaineHousing waxay bixisaa mashaariic badan oo lagaaga caawinayo si aad guriga dib ugu hagaajiso wixii kaa jabana ugu samayso. Barnaamijka Hagaajinta Guryaha (Home Repair Network), waxay bixiyaan dayn dulsaar jaban leh, si aad u bedesho ama ugu hagaajin karto ceelka guriga ama billacadda gurigu, qalabka guriga kulayliya, qalabka korontada (kooraanka) ama dhismaha guriga, iyo haddii aad u baahato inaad u samayso albaabada iyo jaranjarada curyaanka. Waxaa kale oo MaineHousing ay bixisaa mashaariic guriga lagaga baabi'iyo khatarta sunta Leedhka iyo kuwo laguugu sameeyo haddii gurigaagu uu wax ku noqdo dhibaato loo aqoonsaday musiibooyinka dabiiciga ah.
Kirada oo la iska kaalmeeyo: Guryaha kiradoodu way sii qaaliyoobayaan ilaa xad ayna dad badan oo ka mid ah danyarta Maine iyo kuwo noloshoodu meel dhexaadka tahay ayna awoodi Karin. Haddaba waxa la helaa kaalmada bixint akirada oo ah warqadaha lagu dago gurigaad rabto oo loo yaqaan Sekshin eyd-ka, ama guryaha kirada la iska kabo.Haddii aad xaq u yeelato, waraaqadda loo yaqaan Sekshin Eyd-ku waxay kaa caawinayaan si aad ugu kiraysato guriga aad adigu doorato. Guryaha kirada la iska kabaa waxay siinayaan dadka shuruudahooda buuxiya guryo ka jaban sicirka suuqu joogo. Xilliga guryaha la sugayaa wuu dheeraan karaa sidaa darted waxaa habbon inaad labada noocba hal mar wada buuxiso.
Shidaalka oo la iska caawiyo: Haddii aadan awoodi Karin inaad bixiso kulaylka gurigaaga,ama bixin kari waydo korantada, ama gurigaad deggan tahay u baahan yahay shaqooyin wax ka qabanaya isticmaalka shidaalka sida haddii uu u baahan yahay dahaadh (ama alaabta lagu cufo darbiga si guriga looga celiyo qabowga iyo kuleylka), qalabka kuleylka dhaliya oo cusub, ama qalab tashiila korontada waxaa laga yaabaa in lagaa caawiyo. Dadka dan yarta ahi waxay heli karaan kaalmo ay iskaga bixiyaan shidaalka guriga lagu kululeeyo ama wax looga qabto qalabka shidaalka ee guriga.
Kaalmada dadka guri la'aanta ah: Haddii aad tahay guri la'aan ama aad u baahan tahay meel aad u hoyato si deg deg ah, ama aad u baahan tahay guri ku meel gaar ah ama guri laguu raqiisiyey inta aad dhaqaale ahaan ka soo kabanayso, waxaa laga yaabaa in MaineHousing ay ku caawin karto. Waxaan bixinnaa hoy ku meel gaar ah iyo siyaabo kale oo lagu helo guryo jaban, waxaanan kaa caawin karraa sidaad u soo heli lahayd guryaha noocaas ah. Waxaa kale oo aan kirada ka caawinnaa dhiibnaa dadka guri la'aanta ah.
Wixii war bixin ah ee dheeraad ah ee ku saabsan mashaariicda iyo waxqabadka MaineHousing kala soo xiriir Telefoonka:
TTY (dadka dhagaha culus) (800) 452-4603.
Haddii aadan u dhalan luqada Ingiriisiga ama uu kugu adag yahay hadalka, akhrinta, qoraalka.ama fahanka luqadani, fadlan sug inta lagugu xiriirinayo qof turjumaan ah oo ku hadla luqadaada kaasoo noo soo gudbin kara codsiga warbixntaada. MaineHousing waxaa u diyaar ah warbixin iyo sharci lagu tarjumay afaf kala duwan haddii aad codsato.
MaineHousing malaha midab kala sooc ku salaysan Isirka, Midabka, diinta, Jinsiga (lab ama dhaddig), Labeebnimo ama caadi, Jinsiyadda (waddanka aad u dhalatay) ,Qabiilka, da'da, laxaad la'aanta Jirka ama kan Maskaxda ama Xaaladdaada xaas ahaaneed marka ay tix gelinayaan codsigaaga, ama ku aqbalayaan ama sida ay kuula macaamilayaan ama marka ay ku shaqaaleynayaan ama mashaariicdooda iyo waxqabadkooda kaleba. MaineHousing waxay bixinaysaa haba kaa caawiya inaad fahamto qoraalkan marka aad codsato.MaineHousing waxaa kale oo ay kuu heli kartaa warqaddan oou qaran hab kale marka aad bixiso ogeysiis ku habboon.MaineHousing waxay u xil saartay qofka hoos ku qoran si ay u xaqiijiso in aan raacno dhammaan sharciyada gobolka iyo kuwa waddanka u degsan ee mamnuucaya midab kala sooca.isla markaana ay u dhagaysato wixii cabasho ah ee naloo soo jeediyo:Jodie Stevens, Maine State Housing Authority (hay'adda Guryaha ee Gobolka miane), 353 water street, Augusta, Maine 04330-4633, Telefoonkeeduna yahay1-800 452-4668, (gobolka gudihisa kaliya ayaa laga soo wici karaa), (207) 626-4600 (cod), ama (207) 623-2985 (dhagoolaha)